Xoghoose.com Iyo Warar Xaqiiqo Ah » DEG DEG:-Shabaab oo Ciidamadii ugu badnaa keenay Afgooye & Xiisad dagaal oo jirta…Xoghoose.com Iyo Warar Xaqiiqo Ah
DEG DEG:-Shabaab oo Ciidamadii ugu badnaa keenay Afgooye & Xiisad dagaal oo jirta…
Iyadoo maalmahan dambe dhaqdhaaqyo ciidan oo kala duwan uu ka socdo Gobolada Shabellaha hoose iyo Shabellaha Dhexe, ayaa wararka ka imaanaya duleedka Degmada Afgooye waxa ay sheegayaan Shabaa ciidamo badan inay soo dhoobeen halkaasi.
Ciidamadan Shabaab ay soo dhoobeen duleedka Degmada Afgooye ee Gobolka Shabellaha hoose ayaa laga kala keenay Gobolada Galgaduud iyo Shabellaha hoose, sida Saraakiil ka tirsan Dowladda ay xaqiijiyeen.
Xoogaga Shabaab ayaa doonaya inay culeys Militari saaraan Degmada Afgooye, maadaama halkaasi uu ka socdo dhaqdhaqaaq ciidan oo ay wadaan ciidamada dowladda.
Nin ka mid ah Beeraleyda duleedka Degmada Afgooye oo magaciisa qariyay, ayaa sheegay in xalay beertiisa ay soo galeen dagaalyahano ka tirsan Shabaab oo isku sheegay, islamarkaana u sheegay inaysan cabsoonin.
Ciidamada Shabaabka ayaa ku lugeynaayay qaab Evantari ah, gaadiidka dagaalka ayaa la sheegay inay uga soo tageen duleedyada fog ee Degmada Afgooye.
Sidoo kale waxaa xusid mudan Shabaab in ciidamo badan ay soo dhigeen deegaanka Basra, si ay isaga caabiyaan dhaqdhaqaaqa ciidan ee ay wadaan ciidamada dowladda.
Dowladda Somaliya ayaa ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah Ururka Shabaab, balse sida muuqata dowladda wax horumar ah kama aysan sameyn dagaalada ka dhanka ah Shabaab.